AKHRISO Magacyada qaar ka mid ah saraakiishii Godane laladilay oo la helay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
AKHRISO Magacyada qaar ka mid ah saraakiishii Godane laladilay oo la helay
Diyaaradaha dalka Mareekanka ee xagga duqeymaha ayaa dilay Hogaamiyaha Al-shabaab Axmed Godane, dhawaan, waxaana sidoo kale la dhintay rag kale oo saraakiisha Al-shabaab ka mid ahaa.
Hadabada waxaa la helay Magacyada Rag ka mid ah saraakiishii Godane la dhimatay, waxaana dhanka kale Al-shabaabka beeniyeen in Sagaal s arkaal ay dhinteen.
Magacyada saraakiisha iyo faah faahintooda
1- Axmed Gureey
Axmed Gureey oo dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Mareykanka. Nninkaasi ayaa waxaan weli la garan Magaciisa dhabta ah, balse saraakiisha kooxda Al-Shabaab ayaa ugu yeera Axmed Gureey, halka magaciisa labaadna uu yahay Abuu Mansuur Al-Amriiki waxa uu magac ahaan lawadaagay Sheekh Amriiki ee horey uu Axmed Godane ugu dilay koonfurta soomaaliya.
Sarkaalka labaad ayaa lagu Magacaabaa Maxamed Amiin waxaana uu kamid ahaa saraakiisha sida gaarka ah ugu dhaweyd Axmed Godane. Waxa uu sidoo kale ka mid ahaa Saraakiisha safarka ku wehlineysay Axmed Godane oo isna goobtaa ayuu ku dhintay.
Dhanka kale, waxaa la soo sheegayaa inuu aad u badnaa dhaawacyada soo gaaray Saraakiishii la soctay Hogaamiyihii geeriyooday, waxaana lagu dabiibayaa Isbitaalka Kooxdu ay ku leedahay Magaalada Baraawe.
Sirdoonka reer Galbeed-ka ayaa aaminsan in dhimashada Al-Shabaab ay ka badan tahay inta ay kooxda qiraneyso, balse Kooxdaas waxay ku adkeysatay kaliya 3 horjooge in laga dilay.